Nagu saabsan - Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd.
Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay bishii Febraayo 2019 ， Waxay ku taal Machadka Cilmi-baarista Teknolojiyada Warshadaha ee Qingdao High-tech Zone, Gobolka Shandong is Waa ganacsi saynis iyo teknoloji oo diiradda saaraya R&D iyo soo saarida aaladaha caafimaadka ee duurka POCT.
Shirkaddu waxay ku qalabeysan tahay aqoon isweydaarsi heer-100,000 ah iyo qalab cilmi baaris caalami ah oo hormuud ah iyo qalabka wax soo saarka, waxayna leedahay 1,200 mitir laba-jibaaran oo cilmi-baaris ah iyo aqoon isweydaarsi.
Nidaam maareyn tayo leh oo dhameystiran ayaa la sameeyay si loo buuxiyo shuruudaha sharciyada, xeerarka iyo wax soo saarka caadiga ah.
Shirkaddu waxay leedahay laba aaladood oo tiknoolaji ah oo lagu ogaado nukliyeerka loo yaqaan (Isothermal nucleic acid detection platform, ASEA nucleic acid platform detection fast) ， Alaabooyinka la soo saaray ee ku saleysan barxaddan waxay leeyihiin astaamaha fudeydka, xawaaraha, gaar ahaanta sare, iyo dareenka sare.
Waxaa si guul leh loogu dabaqay dhinacyo badan sida caafimaadka caafimaadka, badbaadada cuntada, cudurka xoolaha iyo wixii la mid ah.
Soosaara Chips-ka gacanta lagu ogaado oo leh waxqabad xasilloon iyo qeexitaan sare oo aan ku tiirsanayn qalabka adag. Labada mowduuc ee kor ku xusan waxay aasaas farsamo wanaagsan u dhigeen alaabada shirkadda 'molecule POCT', waana isha muhiimka u ah mawduucyada alaabada baaritaanka degdegga ah ee shirkadda. inuu suuqa galo.
Shuruudaha cusub ee kahortaga iyo xakameynta cudurka faafa ee SARS-CoV-2 iyo heerka ay taagan tahay ganacsiga
Maaddaama faafidda adduunka ay sii kordheyso, ka-hortagga iyo xakamaynta cudurrada waxay gashay heer caadi ah.
Si si sax ah looga jawaabo xaaladda taagan loona buuxiyo shuruudaha baaritaanka nucleic acid ee xaaladaha kala geddisan, Waxaa lagama maarmaan ah in la dadajiyo cilmi baarista iyo horumarinta iyo soosaarida urur, soo saar alaabooyin isku dhafan oo dhakhso leh oo ku habboon tijaabada goobta, iyo wanaajiyo waxsoosaarka iyo baaritaanka nidaamka farsamada nukliyeerka dalkeyga.
Bishii Luulyo 29, Ra'iisul Wasaaraha Li Keqiang wuxuu qabtay shirkii fulinta ee Golaha Gobolka Si loo hubiyo qorshaha guud ee ka hortagga iyo horumarinta cudurrada, waxaa la sameeyay qabanqaabo lagu sii xoojinayo dhismaha awoodda baaritaanka nukliyeerka.
Kulanku wuxuu tilmaamay inay lagama maarmaan tahay in la abaabulo dhammaan dhinacyada si loo dardar-geliyo horumarinta iyo soo-saarista wax soo saarka iyadoo waqti gaaban, xasaasiyad sare leh iyo hawlgal fudud.Si loo xoojiyo tababbarka shaqaalaha kormeerka isla markaana loo kordhiyo ciidanka baaritaanka guurguura si macquul ah, bukaanka ku jira rugaha caafimaadka qandhada, iskuday inaad gaabin warbixinta ilaa 4 saacadood.
Intii lagu guda jiray dillaaca SARS-CoV-2 Cudurka faafa, kooxda Jianma Gene Technology Co., Ltd. waxay la shaqeeyeen jaamacada Qingdao ee sayniska iyo teknolojiyadda iyo jaamacada Qingdao si loo baaro dhibaatooyinka muhiimka ah, loo horumariyo waxyaalaha ogaanshaha nukliyeerka, iyo in la ogaado qiyaastii 30 daqiiqo.
Bishii Maarso 13, 2020, xirmada 'COVID-19' waxay heshay shahaadada EU CE; Bishii Maajo, waxay heshay shahaadada dhoofinta ee soo-saaraha cusub ee tijaabada taajirka ee Wasaaradda Ganacsiga Shiinaha.
Tuubada muunad qaadista hal-adeegsiga ee ay soo saartay shirkaddeenu waxay qaadataa oo keliya 3 daqiiqo in lagu dhammaystiro ka-soo-qaadista muunadda iyo soo-saarista degdegga ah.Waxsoosaarka degdegga ah ee ogaanshaha asiidhka nukliyeerka ee ay soo saartay shirkadda ayaa gaabinaysa waqtiga ogaanshaha asiidhka nukliyeerka illaa 30 daqiiqo, taas oo si buuxda u buuxisa kahortagga iyo xakamaynta baahiyaha qaranka iyo baahiyaha bulshada.Waqtigan xaadirka ah, COVID-19 alaabooyin tijaabo ah oo deg deg ah ayaa loo dhoofiyay Indonesia, Brazil iyo dalal kale, waxaana aqoonsaday macaamiisha.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Xirmooyinka Tijaabinta Shiinaha, Canine Parvovirus (Cp), Qalabka Soo-saarista Acid Nucleic Deg-degga ah, Qalabka Soo-saarista-Bilaashka ah,